5 Imibuzo Okufanele Uyicabangele On The Date First
by Samantha Greaves
Igcine ukubuyekezwa: Dec. 27 2017 | 2 imiz ufunde
Dates First kungaba like izingxoxo, kodwa ngenxa yothando ukuphila kwakho. Zikwenza kokubili wethukile futhi ube nexhala. Futhi ngezinye izikhathi ungase uzithole kanjalo sokudliwa imicabango usuku yakho kini ekupheleni kosuku, uyaqaphela okufundile lutho ngabo.
Ungakhathazeki, kukhona isixazululo lokhu.
Lezi 5 imibuzo kuzoqinisekisa ukuthi uhamba kude usuku lwakho lokuqala azi ngokuzethemba uma uzoba nesithakazelo ubabone.
Yini into oyikhonzile ukuze benze?
Lena enye elula kusukela eziningi us sithanda ukukhuluma ngathi. It kuyokusiza ukuba uvule ukunakwa on usuku lwakho futhi ngempela ukufunda lokho kuletha injabulo kubo. Ngokuvamile uma ubuza lo mbuzo, usuku lwakho uyophinde embule ukungathandwa zabo. Phawula the positives kanye ezingezinhle - kufihlwe izimpendulo zabo kungaba umqondo esikhulu usuku lwesibili okusekelwe izithakazelo zabo.
Ngabe eside kangakanani single?
Lokhu kungase kubonakale umbuzo ungakhululekile, kodwa kubalulekile. Ukwazi uma usuku lwakho ekhetha ukuba single Versus kwabo single kodwa ngifuna ngenkuthalo, siyokwazisa wena uma imali ngokuhlakanipha isikhathi sakho kulo usuku lokuqala. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi imigomo yakho ubuhlobo ukufanisa. Into last ufuna iwukuba nobabili ukuba ufune izinto ezahlukene futhi ukuthola lokhu dates eziningi kamuva.
Ingabe inemithwalo siblings?
Ngokubuza lo mbuzo mkhulu ngoba aphinde, wena turning focus on usuku lwakho. Wena futhi eshaya zibe imicabango yabo on umndeni. Bangase kwembula uma ekugcineni ongathanda ukuqala umndeni eyabo. Lo mbuzo uzokunika okuningi ukukhuluma kusukela siyohlale indaba enkulu ezungeze isihloko zakubo.
Yini isibonakaliso sakho?
Lena oldie kodwa goodie. Kuwumqondo omuhle uma ufuna ukubuza lo mbuzo ekuqaleni kosuku. Abantu exhunywe izimpawu zawo zomgamu wezulu nalo ngisho uma ningakholwa ekufundeni izinkanyezi, kunjalo namanje ngokuphelele evulekile ukuzwa lokho wazi mayelana izimpawu zabo. Izimpawu Zodiac kukhona enye extension thina njengabantu akukho sithanda okungaphezu kokufunda izinto ezintsha ngathi.
Yini oyibhekayo umlingani?
Lena ebalulekile umbuzo wokuqala date. Kuyinto into a lot of daters bagweme ecela ngoba bengafuni okwesabisa omunye umuntu away. Kodwa Ngokubuza lo mbuzo uyonika ukuqondisisa ohlotsheni lwabantu ukuthi ukubamba iso usuku yakho futhi lapho beka up in comparison. Zama ukuba too ukwahlulela izimpendulo zabo uma ungavumelani nabo. Lokhu kusekelwe ezithakazelweni zabo siqu futhi kufanele kwamukelwe njengoba enjalo. Emva lo mbuzo owabuzwa, niyokwazi ngokuqinisekile uma lokhu usuku lokuqala unakho khule into okuningi.